NGABA IVENOM NGOKU IYINXALENYE YE-MCU? - IINDABA
I-Venom: Makubekho i-Carnage ye-2021 yaseMelika i-movie ephezulu equka i-Marvel Comics character Venom, eyenziwa yi-Columbia Pictures ngokubambisana neMarvel neTencent Pictures.
Ikhutshwe ngu Sony Imifanekiso Ikhupha, yile bhanyabhanya yesibini kwi-Sony's Spider-Man Universe kunye nokulandelelana kweVenom (2018).
Nje ukuba uEddie noVenom babonakale, idabi liyaqhubeka, kuba idabi lisilwa neCletus / Carnage. Ngenxa yokuba ii-symbionts zithambile kwisandi-kwaye amandla kaShriek kukukhwaza ngogonyamelo-ujika abe ngumqobo kwimbubhiso.
Oku kudala ukwahlukana phakathi kweCarnage kunye nomphathi wakhe, uCletus, othandana noShriek kwaye akadingi ukuba afumane umonakalo. Embindini wedabi, uCarnage wamhlasela.
Esi sesibini xa uEddie noVenom beqonda ukuba uCletus noCarnage bahlala bengabotshwanga; Ke, ukubulawa kwabantu ngokuqinisekileyo kuya kuba lula ukoyisa kunokuba bebeqondile ekuqaleni. Ngoncedo luka-Anne kunye nomlingane wakhe, uDan (Reed Scott), uEddie noVenom batshabalalisa ngokufanelekileyo uCletus kunye neCarnage.
asithathi sigqibo ukuba uVenom uza kufumana ukudityaniswa okupheleleyo kwi-MCU. Kwakungekho ngaloo ndlela umva ukuba u-Sony watsala u-Spider-Man kwi-MCU kangangenyanga, kungoko ndingothuka xa bezokulungiselela ukuhlala nentsalela yeepropathi zabo zoMangaliso ngokulula kodwa.
Kwimeko yokuba iVenom ihambe njani xa isiya kwi-MCU isuka kwindalo iphela, inye into eqinisekisa ukuba ayingoEddie lo okanye yiVenom.
Nangona ekuqaleni uEddie ekholelwa ukuba inye into ayenzayo ngoVenom, ixhala lokwenyani kunye nokothuka kwesydiote kungqina ukuba ukhohlisiwe nje njengoEddie.
Inokucaca kwakhona ngaphakathi kweziganeko kwiVenom: Makubekho i-Carnage yokuba ubuchwephesha bezothutho bahluke ngokupheleleyo kobu kwi-Spider-Man: Kwindinyana yesigcawu, kuba abalinganiswa belo bhanyabhanya babekhutshiwe ngaphandle kwendawo yokuhlala yabo ngamasango.
Ngokwahlukileyo, indalo iphela ijikeleze uEddie ngelixa ehlala kwindawo efanayo. Konke oku kuthetha ukuba omnye umntu unyanzele uEddie ukuba afowunele izinto ezininzi kwi-MCU.
I-Narcissism ikakhulu iyimodeli eqinileyo yeVenom. Isinxibo sakhe silihlumelo le-Venom symbiote, kwaye njengeVenom, iCarnage inokungena kwiiyantlukwano zamagunya eSigcawu-Man, afana namandla aphakamileyo, ubugorha, kunye nesantya.
NjengeVenom, iCarnage ingathintela iSigcawu-Sigcawu-Sense sikaMntu, nangona engena kwizimvo zakhe ezomeleziweyo. Nangona kunjalo, ngenxa yesifo seCarnage's symbiosis esivela eMhlabeni ngaphesheya kweplanethi eyomeleleyo, yomelele kwaye ayizinzanga ngakumbi.
I-Carnage iyasebenza ngokwaneleyo ukuba ilwe nesigcawu ngasinye se-Spider-Man kunye neVenom. Unokuphinda asebenze kwimikhwa yakhe ebukhali ngezixhobo ezahlukileyo zokubulala kwaye unokubazisa njengeprojekhthi.
ividiyo ephambili yeAmazon wiki
brandel chamblee umfazi wokuqala
i-chipotle ivuliwe ngoJulayi 4
sims 3 ukukopela ds
I-owen shroyer net efanelekileyo
la fonda ukumangalela i-honeycutt